परीक्षा नियन्त्रकज्यू, ट्रान्सक्रिप्ट बनाउने झ्यालमा किन रूँदै उभिनुपर्छ विद्यार्थी ?
Tue, Mar 02, 2021१८ फागुन, २०७७
- दीलिपाश्री अधिकारी
यो पालि जसरी पनि थेसिस सक्नु नै थियो ।
लकडाउनको समयमा जसरी पनि सक्छु भन्ने अठोट थियो । त्यहीबीचमा कोभिडका कारण अनलाइन माैखिक परीक्षासमेत दिएँ । कोभिडको बढ्दो सन्त्रासका कारण करिब १० महिना घर (स्याङ्जा) नै बसेँ । पुसको पहिलो साता काठमाडौं फर्किएँ । मेरो पहिलो प्राथमिकता आधिकारिक रूपमा मेरो पढाइ सक्ने भन्ने नै थियो ।
परीक्षा पास भएको तीन वर्षसम्म पनि थेसिस पूरा नगरेकाले मेराे अध्ययन स्नातक तह पास गरेको सरह नै थियो । यो मलगायत परिवारका लागि चिन्ताकाे विषय थियो । पुसकाे दोस्रो साता कलेजबाट थेसिसको अंक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा पठाएपछि ट्रान्सक्रिप्टका लागि फारम बुझाएँ ।
कोभिडका कारण दुई महिनापछि आउनू भन्ने जानकारी पाएँ ।
कहीँ दरखास्त दिन मेरा लागि सर्टिफिकेट एकदमै जरुरी भएका कारण र फारममा लेखिएबमोजिम म एक हप्तामा सोधपुछका लागि वा अनुरोध गर्छु भनेर पनिका गएँ ।
झ्यालबाट बैंकको भौचर रसिद देखाउनासाथ म्यामले 'एक हप्तामै आउन कसले भन्यो' भन्दै झर्किन सुरु गर्नुभो । मैले अनुरोध गरेँ । यो पनि भनेँ, 'मेरो साथीले एक हप्तामै लगेकी थिई । मलाई जरुरी छ त्यसैले ।'
जवाफमा 'त्यस्ता जमाना गए' भन्ने पाएँ ।
त्यहाँ धेरै बहस गर्नु उचित लागेन र बाहिर निस्किएँ । अब पालो सोर्सफोर्स लगाउने थियो ।
एक नेतामार्फत पनिकाको छोडेको कर्मचारीलाई फोन गरेँ । उहाँमार्फत कन्ट्रोलरनिकटको एक सरलाई फोनमार्फत अनुरोध गरेँ ।
भाग्यवश भन्नुपर्छ- उहाँले सकारात्मक रेस्पोन्स गर्नुभयो । मेरो नामको रसिद लिएर जानुभयो । सर्टिफिकेटमा नाम क्न्फ्युज भएकाले बोलाउनुभयो र म कार्यालयभित्र गएँ । भित्र गएपछि पो थाहा भयो- एक महिनापछि आउनू भनिएकोमा रजिस्ट्रेसन कार्डको र मास्टर्सको सर्टिफिकेटमा नाम फरक भएकाले प्रिन्ट हुने ठाउँबाट फर्काएर पेन्डिङमा राखिएको रहेछ । जुन कुरा मैले झ्यालबाट सोध्दा बताइएको थिइएन ।
मेरो ध्याउन्न जसरी पनि आजै ट्रान्सक्रिप्ट हात पार्न पाए भन्ने मात्र थियो । रजिस्ट्रेसन कार्डमा दीलिपाश्री एसी र मार्कसिटमा दीलिपाश्री ए.सी रहेछ, जुन कुरा मलाई याद नै भएन । तर, कोठाभित्र जाँदा ट्रान्सक्रिप्टका लागि बुझाएको फारम भेटिएन । त्यो अव्यवस्थित र फाइल मात्रै भएको कोठामा सबै फाइल खोज्दासमेत मैले भरेको फारम भेटिएन ।
शुक्रबारको दिन, १ बजिसकेको थियो । फाइल नभेटिएको र नाममा समस्या भएकाले अर्को दिन आउन भनियो । मेरा लागि निराश भएर फर्किनुको विकल्प थिएन । भोलिपल्ट बिदा भएकाले आइतबार आउने भन्दै म फर्किएर गेटमा पुगेकी थिएँ । मेरो फाइल भेटिएको भन्दै फोन आयो र म पुनः ट्रान्सक्रिप्ट डिपार्टमा फर्किएँ ।
एक पटक सक्कली रजिस्ट्रेसन कार्ड हेर्ने भनियो तर त्यो दिन मैले कुनै पनि सक्कली कागजात बोकेकी थिइनँ । रजिस्ट्रेसन कार्डबाट थाहा हुन पनि सक्छ भनेपछि र मलाई जसरी पनि त्यही लिन पाइन्छ कि भन्ने लागेपछि २ सय तिरी बैंक भौचर लिएर आउँदा १:३० भइसकेकाले खाजा समय भयो र २:३० सम्म कुरे । रजिस्ट्रेसन कार्डकाे प्रतिलिपि बनाएँ । शुक्रबार भएकाले ३ बजे अफिस बन्द त भयो नै, घरमा हुँदाहुँदै काम हुन्छ कि भनेर बनाएको रजिस्ट्रेसन कार्डले समेत काम गरेन ।
आइतबार पुनः पनिका गएँ सक्कली मार्कसिट लिएर । प्रति सर्टिफिकेटको एक सय रुपैयाँका दरले २ सय रुपैयाँको भौचर काटेँ र रजिस्ट्रेसनअनुसारको नाम सच्याई पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गरेँ । सो फाइल डेपुटी कन्ट्रोलरले साइन गर्दिएपछि मात्रै सदर हुने र प्रिन्ट गर्ने कोठासम्म पुग्ने रहेछ ।
११ बजे पुगेकी थिएँ तर उहाँ आएर अघिल्ला निवेदनहरूमा साइन गरी निस्किनुभएको रहेछ । आएर गइसकेको र अब आजलाई नआउने जानकारी पाएपछि फेरि मसँग सोर्सफोर्सबाहेकको उपाय थिएन ।
शुक्रबार जसले सहयोग गर्नुभएको थियो, उहाँलाई फोन गरे र सम्बन्धित 'सर'को नम्बर लिएर फोन गरे । उहाँको ३/४ घन्टामा आउँछु भन्ने जवाफ पाएँ । कुरिन्जेलको त्यो समयको हुटहुटी म बयान गर्न सक्दिनँ । उहाँका लागि त्यो मात्र एउटा हस्ताक्षर थियो । तर, मेरा लागि त्यो हस्ताक्षर अर्को यात्राका लागि महत्त्वपूर्ण थियो ।
उहाँ आइदिनुभयो शायद मेरै लागि । तर, ठ्याक्कै १:३० मा । मेरो सोच थियो- आइतबार नै ट्रान्सक्रिप्ट लिन्छु र कलेजबाट क्यारेक्टर सर्टिफिकेट निकाल्छु । जुन कार्यका लागि यति हतार गरेकी छु, त्यो काम पूरा गर्छु । हस्ताक्षरसहितको निवेदन त पुग्यो तर फेरि फारम गायब । असरल्ल फारम र मार्कसिट छरिएका कोठामा दोस्रो पटक फेरि फारम हराइदिए । उल्टै तिम्ले लग्या हो भनेर सोधपुछ गरिन्छ ।
करिब १० मिनेटपछि फारम त भेटियो तर असाध्यै 'सोमत' भएकी म्यामले भन्नुभो, ' खाजा खाने समय भो, डिस्टर्ब गर्ने ? भोलि आउनुस् १२ बजे ।'
मलाई ट्रान्सक्रिप्ट जरुरी थियो । म्यामको हातमा फारम थियो । उहाँले हेर्दिएमा प्रिन्ट त्यत्ति नै बेला भइहाल्थ्यो । मैले 'म्याम प्लिज' भन्दै अनुरोध गर्दै म्यामको चढेको शैली देखेर होस आज भन्ने भयो र भोलि आउँछु भनेर फर्किएँ ।
अनि सोमबार आयो । आज त हातमा पर्ने दिन । बानेश्वरबाट दिनदिनै बल्खु पुग्नुपर्ने दिनको पनि अन्त्य हुने दिन । शैक्षिक यात्राको करिब अन्तिम सर्टिफिकेट लिने दिनको उत्साह थियो नै । भाेलिपल्ट १२:३० मै पुगेँ ।
'म्याम मेरो भयो ?'
'ह्या तपाईं आइसक्नुभयो ?'
प्रिन्ट शाखामा बुझ्दा त्यहाँसम्म फारम आइनपुगेको थाहा पाएँ । पुनः म्यामलाई बिन्ती बिसाएँ, 'जरुरी भएकाले हो ।'
अर्की म्यामले झ्यालमा आएका प्रायः विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै कुरामा हप्काएकै हुन्थ्यो । म भित्र बसेर कुरेकी नै थिएँ तर फेरि अचम्म, म गएको तेस्रो दिन फेरि फारम गायब । यता खोजिन्छ, उता खोजिन्छ, असरल्ल परेका फाइलभित्र हेरिन्छ तर भेटिँदैन ।
त्यही बीच म्यामले 'बाहिर जानुस् डिस्टर्ब भो' (ती तुच्छ शब्द यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक नलागेकाले)' भनेर पटक-पटक नधम्क्याएको होइन तर त्यो अस्तव्यस्तमा फेरि मैले आफ्नो काम छोडेँ भने थप दु:ख पाउनेछु भन्ने लाग्यो र कुरिरहेँ । अकस्मात् फाइल भेटियो र प्रिन्टसम्म पुगेको देखेँ ।
मैले सोधेँ, 'कति समय लाग्छ अब ?' प्रिन्टपछि फेरि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भन्ने रुखो बोलिसहितको जवाफ पाएँ । अब फेरि अर्को हस्ताक्षरका लागि फेरि कति कुर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्यो । बाहिर निस्किएँ र चौरमा बसेँ ।
अस्ति सहयोग गर्नुभाको सरलाई फोन गरेर गुनासो गरेँ । सरले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने मान्छे पाउनुभयो, काम हुने भयो । त्यही कुरो महत्त्वमा राख्नुस् न भन्नुभयो । होजस्तो पनि लाग्यो ।
करिब १ घन्टा कुरेँ । फेरि खाजाको समय हुन लागेकाले भित्र गएर सोधेँ र थाहा पाएँ कि प्रिन्ट भइसकेको रहेछ र बाहिर झ्यालबाट माग्नुस् भन्ने आवाज सुनेँ । झ्यालबाहिर लामो लाइनमा बसेँ । जब पालो आयो, बैंकमा काटेको भौचर मागियाे ।
मैले भित्रै दिइसककी छु भनें । उहाँहरू अत्ति रुखो भएर कराउनुहुन्छ । फेरि भित्र गएँ, खोजेँ, न मेरो झोलामा भेटिन्छ, न त्यहाँ नै । मैले जुन कुरा प्राप्तिका लागि त्यत्तिको मिहिनेत गरेँ, अनावश्यक झन्झट बेहोरेँ, म्यामहरूको पटकपटकको रुखो व्यवहार सहेँ । भीडभाडमा पटक-पटक लाइन बसेँ । तर, त्यही ट्रान्सक्रिप्ट पाँउदा उहाँहरूले गरेको व्यवहार सधैँ सम्झनामा रहने भयो ।
मलाई आवश्यक ट्रान्सक्रिप्ट थियो । धेरै मिहिनेतपछि बन्यो पनि तर जब मैले पाउनुपर्ने थियो, बैंकको स्लिप नभएकाले दिन नमिल्ने बताइयो । जहाँसम्म मलाई याद छ, मैले दिइसकेकी थिएँ र मेरो हातमा नाम सच्च्याउनका लागि तिरिएको २ सयको स्लिप थियो । मैले अनुरोध गरेँ । उहाँहरू मान्नु भएन । सायद त्यो नियम थियो होला, जुन उहाँहरुले फलो गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यो रेकर्डका लागि मात्र राखिन्थ्यो र सम्बन्धितलाई फाइल दिएपछि पोको पारेर डस्टबिनमा फालिन्थ्यो । तर, मेरो लागि अन्तिममा पोको पारेर फाल्नका पनि त्यो स्लिप हातमा थिएन ।
त्यो समय मैले आफूलाई संसारकै कमजाेर व्यक्ति होजस्तो ठानेँ । आँखाबाट बरर आँसु झर्‍याे । जुन सर्टिफिकेट पाउनका लागि मिहिनेत गरेँ, त्यही प्राप्त गर्दाजत्तिको नमीठो अनुभूति सायदै कसैले भोग्लान् । तर, यतिका दिन धाइरहँदा के महसुस भयो भने पनिका जाने जोकोही पनि सहज र सरल तरिकाले काम सकाउँदैनन् । रुखो बोली सुन्नैपर्ने र कुनै न कुनै झमेला वा काम ढिला गर्दिने पनिकाको सिद्धान्तजस्तो नै देखियो ।
शिक्षाक्षेत्रको मात्र काम गरिने अर्थात् पढेलेखेका मात्र मानिस जाने कार्यालयमा यस्तो अस्तव्यस्त र अमर्यादित व्यवहार गरिन्छ ।
त्यहाँ जाँदा सर्टिफिकेट लिने मात्र होइन, दुर्व्यवहारसमेत सहने शक्ति जमाएर जानुपर्छ ।
नियन्त्रकज्यू, रजिस्ट्रेसन कार्डअनुसारको स्नातकोत्तरको मार्कसिटमा नाम नभएकाले अतिरिक्त शुल्क तिरी रजिस्ट्रेसन कार्डअनुसारकै ट्रान्सक्रिप्ट त बनाएँ । तर, रजिस्ट्रेसन कार्डकै अनुसार बनाइने स्नातक तहको ट्रान्सक्रिप्टमा किन नाम एउटै छैन ? के त्यो समय अहिलेजस्तै सोधपुछ गर्नु पर्दैनथ्यो हो ?
नियन्त्रकज्यू, स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहमा थर फरक-फरक छ । मैले मिहिनेतले प्राप्त गरेका मेरा सर्टिफिकेट के फेक हुन् ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ७, २०७७, १२:३३:००
गाउँपालिका अध्यक्ष सवार गाडीबाट कमिसनबापतको ८ लाख रुपैयाँ बरामद, अध्यक्ष फरार गाउँपालिका अध्यक्ष सवार गाडीबाट कमिसनबापतको ८ लाख रुपैयाँ बरामद, अध्यक्ष फरार2min read
पश्चिम नेपालमा कहाँ-कहाँ बस्छन् वादी समुदाय, कस्तो छ उनीहरूको अवस्था ? पश्चिम नेपालमा कहाँ-कहाँ बस्छन् वादी समुदाय, कस्तो छ उनीहरूको अवस्था ?3min read
राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पद रिक्त, प्रतिस्पर्धामा ८ कार्यकारी निर्देशक राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पद रिक्त, प्रतिस्पर्धामा ८ कार्यकारी निर्देशक4min read
गाउँपालिका अध्यक्ष सवार गाडीबाट कमिसनबापतको ८ लाख रुपैयाँ बरामद, अध्यक्ष फरार2min read
पश्चिम नेपालमा कहाँ-कहाँ बस्छन् वादी समुदाय, कस्तो छ उनीहरूको अवस्था ?3min read
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई स्वदेश फर्किँदै 1 min read
राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पद रिक्त, प्रतिस्पर्धामा ८ कार्यकारी निर्देशक4min read
मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावः नेकपाका दुवै पक्षसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्दै कांग्रेस7min read
हरारीकाे लेख : कोभिड वर्षले हामीलाई के सिकायो ? 24 min read
आदिम कलेजले सुरु गर्‍यो १० लाखकाे आदिम इन्नोभेसन स्टार्टअप फण्ड2min read
शिक्षामा विभेद : दलित विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा छैनन् डेस्क-बेन्च4min read